တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: မင်းသားလေး နှင့် ဆောင်းဥသြ
ဖတ်ပြီး မနက်စောစောမှာ အလွမ်းတွေ ဝေသွားတယ် မမေ။
ဖတ်ရင်း.. ဟို သီဟိုဠ်ရာဇ၀င်ထဲက သာမဏေမလေးနဲ့ ကိုရင်လေးတို့ရဲ့ မေတ္တာဘွဲ့လေးကို ပြေးသတိရမိတယ်။ ရှစ်နှစ် ကိုးနှစ်အရွယ် သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ဘုရားပွဲမှာ ဆုံမိရာကနေ အခုအဘွားလို ဖြစ်နေခဲ့ကြတာ။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက် အိန္ဒိယမှာ စစ်ပြေးရင်း ပြန်ဆုံခဲ့ကြတယ်။
အင်း စာရေးသူဟာလဲ သူ့အဘွားခြေရာနောက် ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ပြီး အခြား မင်းသားလေးတစ်ပါးကိုများ မျှော်နေလေရော့သလား မသိ။ အခုထိ တကိုယ်တည်း အပျိုကြီး။း)
1/30/2014 1:02 AM
myaw thwar tal.
1/30/2014 3:58 PM
ဟုတ်တယ် ဖတ်ပြီး မောသွားတယ်..
2/05/2014 4:13 AM
ဖွားဖွားရဲ့မေတ္တာလို့ ထင်ပါတယ် မေ ရေ. အဲဒါကြောင့်လဲ အကြာကြီးခိုင်မြဲတာပေါ့. မေ့ဖွားဖွားငယ်ငယ်က ကိုကို မင်းသားဘယ်သူများလဲလို့ တွေးနေမိတယ်
2/06/2014 2:37 PM
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဘ၀ကြီးက မျက်လှည့်ပြပုံ ဆန်းတယ်နော် မမေ...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အိပ်မက်ထဲက ကိုယ့်ဘ၀ထဲက မင်းသားလေးမဟုတ်ဦးတောင် မင်းသားလေးပဲလို့ ခံစားပြီး အလွမ်းဖြေလိုက်တဲ့ မမေရဲ့အဘွားကိုပဲ မြင်ယောင်နေမိတယ်...ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ ကိုယ့်အိမ်မက်တိုင်းပြည်ကြီးပါပဲဗျာ...
2/08/2014 1:21 PM
Welcom to our blog below. pls visit
3/18/2014 4:26 AM